Tao anatin’ny telo andro: Olona faharoa matin’ny coronavirus i Ryan Reyes | NewsMada
Tsy mamela mahazo. Resy tanteraka ary namoy ny ainy, afakomaly i Ryan Reyes rehefa tratran’ny coronavirus tao Toamasina. Olona faharoa matin’ity valanaretina ity teto Madagasikara io teratany vahiny io.
« Amin’alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo fa nodimandry androany (omaly) tao amin’ny toeram-pitsaboana ao amin’ny ozinina i Ryan Reyes. Niasa tao amin’ny departemanta « Utilities », ho an’ny orinasa « Sous traitants » Epi », hoy ny fanambaran’ny orinasa Ambatovy. Notsiahivin’izy ireo tamin’izany fa nampidirina tao amin’ny Isos, ny 11 mey teo izy rehefa noahiahiana fa mitondra ny tsimokaretina covid-19. Nanamarina izany ny valin’ny fitiliana natao taty aoriana, araka ny fanambarana hatrany.
Tsy nampiasa tambavy CVO
Nanamafy izany ny eo anivon’ny CCO, omaly ka nilaza fa notsaboina tao amin’ny hopitalin’Ambatovy io teratany vahiny io. « Tsy nanaraka ny fitsaboana malagasy, misy ny tambavy CVO izy », hoy ny Pr Vololontiana Hanta.
Teratany filipianina ary 42 taona i Ryan Reyes, nodimandry ny alatsinainy tolakandro tokony ho tamin’ny 4 ora mahery, araka ny loharanom-baovao. Mpanara-maso eo anivon’ny tetikasa Ambatovy izy io. Hatramin’ny fotoana nanoratana, tsy mbola fantatra ny anaovana ny razana na halevina avy hatrany na hodorana…
Tsy afa-bela amin’ny fihanaky ny valanaretina aloha izany izao i Toamasina ary foiben’ity valanaretina ity. Tao anatin’ny 48 ora, olona roa no indray namoy ny ainy.
Etsy an-daniny, miisa 10 ireo manaraka fitsaboana ao anivon’ny tetikasa Ambatovy raha miisa 150 kosa ny mpiasa miasa sy mihiboka ao an-toerana, tsy afaka mody mba tsy hisian’ny fiparitahan’ny coronavirus.
Nametra-pialana ny mpikamban’ny CCO Atsinanana
Ankoatra izany, nametra-pialana ny lehiben’ny sampana misahana ny fitsaboana ara-tsosialy « Sercive Medico-social » (SMS) eo anivon’ny sampandraharaham-paritry ny fahasalamam-bahoaka ho an’ny faritra Atsinanana. Anisan’ny tompon’andraikitra misahana ny « krizy covid-19 » io vehivavy dokotera io. Voalazan’ny loharanom-baovao fa leo ny tsy fanarahan-dalàna ary gaboraraka ataon’ny samy mpikambana mandrafitra ny CCO Atsinanana ny tenany. Tsy vitan’izany fa tsy ampy ny fitaovana hampiasain’ny samy mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ary ny fanavahana ny samy mpiasan’ny fahasalamana eo amin’ny fanomezana tombontsoa. Manahy mafy koa ity tompon’andraikitra ity amin’ny mety hoavin’ny fahasalamam-bahoaka eto Toamasina sy ny manodidina, manoloana ny tandrevaky ny sampan-draharaham-panjakana sasany.